မာနထောင်လွှားစကားနှငျ့ဘုရားသခငျ၏ဘုနျးတျောကို — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
အရွယ်ရောက်ပြီးတူညီသောလမ်းဖြစ်ကြောင်း. မကြာခဏဆိုသလိုကျနော်တို့လုပ်ဖို့ထင်မနေအမှုအရာအကျင့်ကိုကျင့်နှင့်အတူ OK ကိုနေ, နေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့မှဖြေဆိုရန်ရှိသည်လူတစ်ဦးထွက်ရှာပါဘူးအဖြစ်. သငျသညျရှေ့ရဲများကမြင်သည်အထိသင်မြန်နှုန်းမှဝမျးမွောကျနေ. ဒီတစ်ခါလည်းကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းနေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပြထုတ်မတှေ့ဘူးအဖြစ်အလုပ်ထားခဲ့ဖို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါပဲ. ဒီတစ်ခါလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအချို့ကိုအဖြစ်ကာလပတ်လုံးပါမောက္ခကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းပါဘူးအဖြစ်စမ်းသပ်မှုအပေါ်ခိုး. လူကျွန်တော်အမှားတစ်ခုခုလုပ်နေလုပ်နေသိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်ဂရုမစိုက်ပါဘူး, ကျွန်တော်မှဖြေဆိုရန်ရှိသည်အခွင့်အာဏာရဲ့မဟုတ်လျှင်.
တွင် 1 ရှမွေလသည် 2, ဟန္နသည်သူမ၏သားရှမွေလ၏မွေးဖွားဖို့တုန့်ပြန်ဆုတောင်း. နှင့်ဤဆုတောင်းပဌနာ, သူမတဦးတည်းသီးခြားအပြစ်တရားကျူးလွန်ဖို့မတခြားသူတွေကိုသတိပေး, သူတို့ရဲ့တရားသူကြီးကိုကြည့်သည်ကို ထောက်.. ငါနှင့်အတူအလှည့် 1 ရှမွေလသည်အခနျးတှငျ 2, လင်္ကာ 3.
ဒါကြောင့်ဂုဏ်ယူစွာပြောနေတာစောင့်ရှောက်သို့မဟုတ်သင်၏နှုတ်ထိုကဲ့သို့သောခိုင်ခံ့သောစိတ်ဟောပြောပါလေစေမနေပါနဲ့, သခင်ဘုရားအဘို့အဘယ်သူသိသောဘုရားသခင်ဖြစ်, သူ့ကိုသဖြင့်အကျင့်ကိုကိုခြိနျနေကြတယ်.
(1 ရှမွေလသည် 2:3)
ဒီစာသားထဲမှာ, ဟန္နမောကျမာမိန့်ခွန်းဆန့်ကျင်ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေး, ဘုရားသခငျသညျအထဲကရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်သူသည်ကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ခံကိုကိုင်ထားလိမ့်မယ်ကွောငျ့,. ဒါကငါသည်ဤကျမ်းပိုဒ်၏အဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ်ထင်ရဲ့: သငျသညျစော်ကားသောစကားပြောဆိုလိုလျှင်, သင်အဘို့ဘုရားသခငျအားဖြေဆိုရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မောကျမာစကားသည်တာအရေးမပါဘူးထင်ဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါ. ဒါပေမယ့်သင်ထင်လျှင်သင့်မောကျမာစကားသည်အရေးမပါဘူး, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဝမ်းနည်. သူတို့ကသင့်အားအရေးသငျ့သညျ, သူတို့ဘုရားသခင်အားအရေးဖြစ်သောကြောင့်, သူသည်သင်ဖြေဆိုရန်ရှိသည်တင့်. ကျနော်တို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘဖြေဆိုမည်မဟုတ်, သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ, သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်းအုပ်ဆရာ, ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အား.
မေးခွန်း 1: ဒါဟာဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်အဘယျသို့ဆိုလို?
အခုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျနော်တို့ရိုးရိုးငါတို့ဘယ်လောက်အံ့သြစရာအကြောင်းကိုကွှားပွောအဖြစ် Self-exalting စကားများထင်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ဂုဏ်ယူစွာပြောဆိုရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်. ထိုအခါငါဟန္နစိတျထဲမှာရှိကြောင်းနည်းလမ်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့အခနျးမှာတွေ့မြင်ကားအဘယ်သို့ထင် 1.
ဟန္နဧလကာနအမည်ရှိသောယောက်ျား၏ဇနီးဖြစ်ခဲ့သည်. သူမသည်သော်လည်းမိမိအသာဇနီးမဟုတ်ခဲ့. သူသည်အဘယ်သူ၏နာမကိုအမှီခဲ့တယောက်ပိုပြီးဇနီးခဲ့ Peninnah. Peninnah ကလေးများခဲ့, ဒါပေမဲ့ဟန္နကမြုံသော. ထိုအ Peninnah အခြေခံအားဖြင့်အကြောင်းဟန္နကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ်. ထိုအကြောင်းကြောင့်သူမ၏ဆားနှင့်ဤကဲ့ရဲ့၏ဟန္နစိတျမကြီးသူမငိုကြွေးရလိမ့်မယ်.
ငါ Peninnah ဟန္နဆန့်ကျင်ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးမာနကိုမိန့်ခွန်း၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ထင်. Peninnah ပဲသူမသားသမီးဆိုတဲ့အချက်ကိုထုတ်ညွှန်ပြမခံခဲ့ရ. သူမသည့်ဖြစ်ရပ်မှန်၏ဟန္နသတိပေးဖို့ကြိုးစားနေမခံခဲ့ရ. သူမသည်သူမ၏ကဲ့ရဲ့ခဲ့သည်, သူမ၏ကျော်အရာ၌ဝါကြွား, သူမ၏နှောင့်ရှက်တတ်ပါ.
ဒါကပဲသူမယုတ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့တူအသံ. ကဂုဏ်ယူစွာဘယ်လိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်? Peninnah ဟန္နကျော်မိမိကိုယ်ကိုအခိုင်အမာတစ်လမ်းအတိုင်းဤသုံးပြီးခဲ့သည်တူကောင်းပြီပုံ. သူမသားသမီးများ၏တစ်နည်းနည်းနဲ့သူမ၏ bearing ပိုကောင်းဟန္နထက်သူမ၏စေယူဆခဲ့လိုပုံရသည်, သောစစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ခဲ့. သမ္မာကျမ်းစာ၌ရှင်းလင်းစွာသားသမီးတို့သည်ထာဝရဘုရားထံတော်မှလက်ဆောင်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်. Peninnah စော်ကားသောပြောနေတာခဲ့သည်, သူမအဘို့ဘုရားသခငျအားဖြေဆိုရန်ရှိသည်မယ်လို့.
ကျနော်တို့စော်ကားသော Talk နည်းလမ်းများ
1. တစျခုမှာသိသာလမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအကြောင်းကိုကွှားပွောဖြစ်ပါတယ်. တခါတရံမှာကျနော်တို့ယျအကြောင်းတခြားသူတွေကိုပြောပြရန်စောင့်ဆိုင်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကျနော်တို့ပြည့်စုံပါတယ်မနိုင်. ငါတို့မူကားထိုသို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းမနေ; ပန်းတိုင်ကိုယျ့ကိုယျကိုပိုကြည့်ကောင်းအောင်သည်. ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အများအပြားအခါသမယအပေါ်ဤသို့ပြုဖမ်းမိပါတယ်. ဒီတစ်ခါလည်းတစ်ဦးမိတ်ဆွေဟောင်းသို့အပြေးနှင့်ငါသည်သူတို့မကျင့်ကိုကျင့်ခဲ့ကြရတယ်အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုမေးမြန်း. ငါ rapping ပြောနိုင်ပါတယ်, ငါမူကားအစားချီးမြှင်သို့မဟုတ်အခြားအောင်မြင်မှုများထောက်ပြချင်ပါတယ်.
2. ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုအခွားသူမြားအကွောငျးဖွစျသညျဟုငါတို့အရာတို့ကိုအကြောင်း? တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာတခြားသူတွေကိုဆဲရေးတတ်. ကျနော်တို့ဟာမကောင်းတဲ့အလငျး၌သူတို့ကိုဆေးထိုးခြင်းခငျြ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကြည့်ကောင်းရှုကောင်းပါလိမ့်မယ်. ဒီတစ်ခါလည်းအလုပ်မှာကျွန်တော်တစ်ဦးအထူးသဖြင့် Co-အလုပ်သမားတော်တော်ပျင်းရိကြောင်းထောက်ပြ, လူငျသညျနှစျဦးအကြားခြားနားချက်ကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်. ဒါမှမဟုတ်အစားတခြားသူတွေနဲ့မသနားတျောမူဖြစ်ခြင်း၏, ကျွန်တော်တို့ Self-ဖြောင့်မတ်င်. ကျနော်တို့သူတို့အပေါ်မှာတရားသူကြီးတစ်ဦးအဖြစ်ရပ်, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးရာအောင်မြင်မှုများအကြောင်းကိုပိုကောင်းခံစားရစေသည်ဖြစ်သောကြောင့်. ဒါကမောကျမာမိန့်ခွန်းဖြစ်ပါတယ်.
3. သို့မဟုတ်တခါတရံကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းသောအရာဟုပြောသောအခါ၌ပင်. ဒီတစ်ခါလည်းကတနင်္ဂနွေညတွင်တစ်ဦးသက်သေခံချက်င်. ဒါဟာမိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့ဘဝ၌ဘုရားသခငျရဲ့အလုပ်အကြောင်း gripping ဇာတ်လမ်းဖြစ်နိုင်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့စိတ်ရင်းကိုသင့်ဘုန်းအသရေအစားသညျဘုရားသခငျ၏အဖြစ်နိုင်. ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသငျသညျသူတို့အဘို့အဆုတောငျးလန့်အသိပေး. ဒါမှမဟုတ်တနင်္ဂနွေကျောင်းမှအတန်းအစားဆုံးမဩဝါဒပေး. သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုယ့်ကိုယ်ကို exalting လျှင်တောင်မှကောင်းသောအရာမာနထောင်လွှားမိန့်ခွန်းဖြစ်နိုင်.
ဤဥပမာတချို့ကအခြားသူများထက်ပိုပြီးသိသာများမှာ. ထိုသို့လျှင်ဒီတော့သင်မည်သို့သိကြပါ? အချက်အလက်များဖော်ပြမှမာနထောင်လွှားမိန့်ခွန်းကိုခြားနားစေသောအဘယျသို့? သငျသညျအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်သူတအဖြစ်သညျဘုရားသခငျဝန်ခံနှင့်ဘုန်းအသရေထိုက်တန်ပါဘူးသောအခါအစော်ကားသော Talking ဖြစ်ပါသည်, သငျ့နှလုံးသို့မဟုတ်ထိုစကားမိမိတို့. အကြှနျုပျတို့ကိုပြုသည့်အခါ, ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏နှငျ့ဆိုငျသောဘုန်းအသရေကိုယူ.
သင်၏စကားသညျဘုရားသခငျအသိအမှတျပွုစခွေငျးငှါ, သျောအဘယျသငျ့နှလုံးနှင့် ပတ်သက်.? အခြားလူများကကွာခြားချက်ကိုပြောပြနိုင်မဖွစျစခွေငျးငှါ, ဒါပေမဲ့ဟန္နသခင်ဘုရားကိုဘယ်သူသိသောဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေး. ထိုအခါငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ချီးမြှောက်တော်မူဖို့ငါတို့စကားကိုအသုံးပြုလျှင်, ကျွန်တော်အဘို့အထံတော်ဖြေဆိုရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်.
ဟန္နဂုဏ်ယူစွာပြောဆိုရန်မကိုဖျောပွစာသားထဲမှာ, ပြီးတော့သူမဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားပါသည်: သခင်ဘုရားအကျင့်ကိုသိလျက်နှင့်အလေးချိန်သူတစ်ဦးသောဘုရားဖြစ်သောကြောင့်,.
မေးခွန်း 2: ကျနော်တို့ဂုဏ်ယူစကားသည်ဘုရားသခင်၏ရန်အဖြေမှဖူးပါနဲ့အဘယ်ကြောင့်?
တစ်ဦးတည်းသာသူတို့အားနောက်ဆုံးနှစ်ခုစာပိုဒ်တိုများ၏စစ်မှန်တဲ့ကြီးဘူးဆိုရင်, တကအများကြီးကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်. ဘုရားသခင်ကိုသိလိုလျှင်, ဒါပေမဲ့တရားသူကြီးမဟုတ်ခဲ့, သို့မဟုတ်ဘုရားသခငျသညျတရားသူကြီးခဲ့ပေမယ့်မသိခဲ့ပါလျှင်. သို့သော်ဿုံရုံတရားသူကြီးကိုလည်း All- သိ. ဘုရားသခင်ဖြစ်. ဘုရားသခငျသညျအထဲကရှာတွေ့လိမ့်မည်မသာ, သူကနားထောငျင်. ဘုရားသခင့ဖြစ်ပျက်င်သောစကားပြောဆိုမှုအတွက်ညှိခပ်သိမ်းသောကာလမှာဖြစ်ပါတယ်. သူကမြေကြီးသားရှိသမျှစတုရန်းပေအတွက်ထားရှိလုံခြုံရေးကင်မရာများတစ်ခုအဆုံးမဲ့ငွေပမာဏရှိပါတယ်နီးပါးတူ. သူကသိတယ်. အကြှနျုပျတို့သမာနထောင်လွှားမိန့်ခွန်းနှင့်အတူသူ၏ဘုန်းအသရေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လျှင်, သူကသိပါလိမ့်မယ်.
ငါသည်သင်တို့၏ဘဏ်အကောင့်သို့သွားကြဖို့ကြီးဘူးဆိုရင်, နှင့်ငွေကို ယူ. ငါ့အအကောင့်ကလျှောက်ထား, ခိုးယူကြောင်း? ၏သင်တန်းက. ငါသည်သင်တို့ကိုပိုငျဆိုငျသောအရာတစ်ခုခုယူပြီးတာပါ, နှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှလျှောက်ထားခြင်း. ငါသည်သင်တို့ကနေယူပြီးမပါဘဲကိုယ့်ကိုကိုယ်သင်တို့ငွေကိုမဆိုအားမပေးနိုငျ. သင်တို့ကိုပိုငျဆိုငျသောကြောင့်, မှားင်.
လူသားတွေမိမိတို့ကိုယ်ဘုန်းအသရေကိုပေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ, သူတို့ကသူ့၏ဥစ္စာကိုလုယူသညျဘုရားသခငျ. သင်သည်ကိုယ်ကိုချီးမွမ်းခြင်းဂုဏ်အသရေမှဆောင်ခဲ့မနိုင်, ဘုရားသခင်ထံမှခိုးယူခြင်းမရှိဘဲ. မာနထောင်လွှားသညျဘုရားသခငျ၏ဘုနျးတျောတခုတခုအပေါ်မှာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်. အဘယ်ကြောင့်? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ဦးပိုမိုမှန်းဆသညျဘုရားသခငျ၏တစ်ဦးအထင်သေးမှလာသောကြောင့်. ငါ့ကိုနောက်တစ်ကြိမ်သည်ဟုဆိုကြကုန်အံ့: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ဦးပိုမိုမှန်းဆသညျဘုရားသခငျ၏တစ်ဦးအထင်သေးထံမှလာ. ကြှနျုပျတို့မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း 1 ရှမွေလသည် 1, ဘုရားသခငျသညျဤအထင်သေး, တခြားသူတွေရဲ့တစ်ဦးအထင်သေးဖို့လည်းဦးဆောင်. ဒါကြောင့်လည်းအလွန်အမင်းကိုယျ့ကိုယျကိုစဉ်းစားသညျဘုရားသခငျ၏လည်းနိမ့်စဉ်းစားမှလာ, နှင့်အခြားသူများလည်းနိမ့်စဉ်းစားရန်ဦးဆောင်.
Peninnah မှားခဲ့. သူမသည်အရှင်ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာသူ့ကိုယ်သူချပြီးကိုယ်မတန်တဆ, သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမိဝမ်းထဲဖွင့်လှစ်လျှင်အဖြစ်. အကြှနျုပျတို့ကိုမကြာခဏတူညီတဲ့၏အပြစ်ရှိကြောင်းင်. ကျနော်တို့ကမြှင့်တင်ရေးအဘို့အကြွေးရသင့်သူများအနေဖြင့်စဉ်းစား, သို့မဟုတ်သူတို့အားကောင်းစွာပြုမူကလေးများ, သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေ. ဟုတ်ကဲ့, ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးစားမှုဆုချပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဘာမှမအာမခံချက်မပါဘူး. ဘုရားသခင့်အလိုတော်တိုင်းအခြေအနေမှာအစစ်အမှန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်. အဘယျသို့နောက်ဆုံးတော့အရေးပါငါတို့အစွမ်းသတ္တိမဟုတ်ပါဘူး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာကို, သို့မဟုတ်ပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သစ္စာတော်.
ဒါကြောင့်မာနထောင်လွှားမှားသည်. ကြှနျုပျတို့အားလုံးကျနော်တို့ကိုတိုက်ရမည်ကိုငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌တချို့မာနထောင်လွှားများ. သင်သည်သင်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာထင်လာတဲ့အခါသင်ဘုန်းအသရေထိုက်ကြောင်း, ကိုယ်တိုင်ကအပြစ်ဖြေကြောင်း. သို့သော်မောကျမာမိန့်ခွန်းအခြားအဆင့်ကတာ. ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတတျနိုငျသ, ဆိုးယုတ်သောလူသားအဖြစ်, ထိုသတ္တိကိုရှိ, ငါတို့သည်ဘုရားသခငျ့ဘုနျးတျောကိုခံထိုက်သောသူပါပဲစဉ်းစားရန်မသာ, ဒါပေမဲ့တကယ်ကလမ်းအခြားသူများအားဆက်ဖို့? ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းနှငျ့ဆိုငျသောဘုန်းအသရေကိုပေးအခြားသူများစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ကြိုးစားမှ. စော်ကားသော Talking တစ်စုံတစ်ဦးလုယက်မသာတူ၏, ဒါပေမယ့်အဲဒီအကြောင်းကလူတိုင်းကိုပြောပြခြင်းနှင့်အတူတူပင်လုပ်ဖို့သူတို့ကိုအားပေးအားမြှောက်.
တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ပါသည်, ဘုရားသခငျသညျသငျသညျအပြစ်ရှိနေသိရဖို့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမလိုအပ်ပါဘူး. ဘုရားသခင်သည်သူ၏ဘုန်းအသရေတော်ကိုလုယူဖျက်ဆီးကိုယ်တော်ကိုဖို့ကြိုးစားနေခြင်းနှင့်အတူတူပင်လုပ်ဖို့အခြားသူများကိုအားပေးအားမြှောက်လူသားတွေသည်းခံမည်မဟုတ်. ဟန္နသည်ကျွန်တော်မပွုသငျ့သ​​ညျကပြောပါတယ်ဘာကြောင့်ဘယ်ဟာသည်.
မာနထောင်လွှားမိန့်ခွန်းဘုရားသခင်နှင့်အတူတစ်ဦးရန်ပွဲကောက်နေသည်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးယုံကြည်သူ၏ဘဝအသက်တာနှင့်အတူကိုက်ညီမှုမရှိရဲ့အဘယ်ကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်. ကြှနျုပျတို့သညျဤနံနက်ကြားသိသည့်အတိုင်း, "ဘုရားသမာနထောင်လွှားဆန့်ကျင်, ဒါပေမယ့်နှိမ့်ချကျေးဇူးပြုတော်မူ၏။ "
ငါတို့သည်ခရစ်တော်ကိုထဲမှာမနေခဲ့လျှင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မာနထောင်လွှားစကားသည်, ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအပြစ်ပေးရန်အဘို့အသေးအခြားအကြောင်းပြချက်ဖြစ်လိမ့်မည်. ကျွန်ုပ်တို့၏မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်လွှမ်းမိုးသောကိစ္စတွင်ကူညီပေးဖို့ဆက်လက်လိမ့်မည်. သငျသညျခရစျတျော၌မနေခဲ့လျှင်, တစ် All- သိ. တရားသူကြီးထက် ပို. ကြောက်စရာဘာမှမရှိဘူး. ဒါကြောင့်သင်ဒီမှာယနေ့ညနေနှငျ့သငျသညျယရှေုကိုမကျင့်လျှင်, ကိုယ်တော်ကိုသိရကျေးဇူးပြုပြီး. သင့်ရဲ့အပြစ်မှ Turn, နှင့်သူ၏သနားခြင်းကရုဏာအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပစ်. သူကမယုံနိုင်လောက်အောင်နှိမ့်ချ-နှိမ့်ချလုံလောက်ဒါကြောင့်သင်နှင့်ငါကဲ့သို့သောဆိုးသောသူတို့နထေိုငျနိုငျကွောငျးကိုအသေခံဖို့ပဲ. သူကအာဏာအားလုံးကိုနှင့်အတူသင်္ချိုင်းမှထမြောက်, ကိုယ်တော်နောက်သို့လိုက်ရန်လူတို့ကိုခေါ်. ငါတို့သည်နောက်၌ကအကြောင်းပိုငျသညျစကားပွောဖို့ကိုချစ်ချင်ပါတယ်.
သို့သော်ခရစ်ယာန်များအားအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်ကိုအလေးချိန်ခံရဖို့အတှကျကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ဒီအခန်းအတွက်ယုံကြည်သူတိုင်းသည်သူတို့စကားကိုပြောတိုင်းမာနထောင်လွှားစကားလုံးများအတွက်ဘုရားသခင်အားဖြေဆိုရန်ရှိသည်လိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုကွဲပြားခြားနားသောဖွစျလိမျ့မညျ. ခရစ်တော်ပြီးသားလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာငါတို့အပြစ်များကိုယူထားပါတယ်. သို့သော်ဤသို့သတိပေးနေဆဲငါတို့သည်လည်းအသက်ရှင်လမ်းကို impact သင့်တယ်. ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌ရပ်လိုက်တဲ့အခါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်ကိုကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှသက်သေခံမည်ဒါမှမဟုတ်တယောက်တည်းခရစ်တော်၌ခိုလှုံဖို့လည်းမာနထောင်လွှားခဲ့ကြကြောင်း.
လည်း, ငါတို့သည်ခမည်းတော်ဘုရားနှစ်သက်ချင်. သင်တန်းသူခရစ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအားရနှစ်သက်င်, ငါတို့မူကားကိုယ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုထှကျလာသောငါတို့ကောင်းသောအကျင့်နှင့်ကျေနပ်ဖြစ်ချင်တယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်ဘုရားသခင်နှစ်သက်ချင်.
ကျနော်တို့မာနထောင်လွှားစကားသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါးစပ်ကနေလာခွင့်ပြုမထားသင့်. ထိုအခါငါတို့သည်ငါတို့၏မာနထောင်လွှားမိန့်ခွန်းအဘို့ဘုရားသခငျအားဖြေဆိုရန်ရှိသည်လိမ့်မည်သော်လည်း, ငါတို့သည်ငါတို့၏အပြစ်များကိုခရစ်တော်အားဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရသင့်တယ်.
မေးခွန်း 3: ကျနော်တို့ဂုဏ်ယူမိန့်ခွန်းကိုဘယ်လို Fight ပါနဲ့?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိန့်ခွန်းကိုစောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်မလောက်မယ့်. ဒါဟာအအေးဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူတစ်စုံတစ်ဦးကပြောပြတူင့်ကိုမှာသူတို့ရဲ့နှာချေကိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. အဘယ်သူမျှမ, ထိုအနာရောဂါတိုက်ခိုက်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကားအဘယ်သို့.
မာနကွီးသောနှလုံးကိုယ်တိုင်ကအတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်း. သို့သော်နှိမ့်ချနှလုံးဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်း. ကျမ်းပိုဒ်အတွက်ဟန္နရဲ့ဆုတောင်းပဌနာ၏ပထမဦးဆုံးစကားသည်မှာကြည့်ပါ 1: "ကျနော့်နှလုံးသခင်ဘုရား၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏။ " ဟန္နနှင့်သခင်ဘုရား၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရန်အသင့်လျော်တုံ့ပြန်မှုကျွန်တော်တို့ကိုပြသထားတယ်. ကိုယ့်သခင်ဘုရားပေးတော်မူပြီယျဝမျးမွောကျသောစိမ, ဒါပေမဲ့အရှငျအတွက်ကိုယ်တော်တိုင်. ကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်မှုမာနထောင်လွှားဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အစားကကိုနှိမျ့ခခြွငျးကိုထုတ်လုပ်သင့်ပါ, ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ထံမှလက်ဆောင်ကိုလက်ခံရရှိကြောင့်
ဘုရားသခင့ပေးသည်နှင့်သိမ်းယူ. ဘုရားသခင့ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်မပြောဘဲ. ဒါပေမယ့်သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းသောနှင့်သူ၏ဘုန်းအသရေဘို့အကအားလုံးကိုမ. ကျွန်တော်တို့လွန်းသောသူတို့သည်အမှုအရာအပေါ်မှီခိုရန်စတင်သောအခါအကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ပျက်. ဘုရားသခင်၌ရွှင်လန်းခြင်းမာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်မဲ့နှစ်ဦးစလုံးသေဆုံး.
သငျသညျဘုရားသခငျကိုအကိုဘယ်လိုဝမျးမွောကျဘူး? ဒါကြောင့်အရာရာကိုနောက်ကွယ်မှသူကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးမှကြာအဘယ်သို့ပြု. သင်သည်ထိုစစ်ဆေးမှုများခံယူကြသောအခါဘုရားသခငျသညျခြီးမှမျးပါ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာမီကဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အဘယ်ကြောင့်ဤသူကား. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုယူဆမာနထောင်လွှားရဲ့ Remembering အမြဲထွက်သွားပါလိမ့်မယ်. ဆန္ဒရှိသခင်ဆိုရမည်. အခြားသူများကိုသင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ်တွင်သင်ဂုဏ်ပြုကြသောအခါဘုရားသခင်အားဘုန်းအသရေ Give. တစ်မိနစ်အဘို့သင့်စိတ်နှလုံးသည်အကြွေးယူခွင့်ပြုမနေပါနဲ့. သင့်ရဲ့မောကျမာမိန့်ခွန်း Watch. သင်၏နှလုံး၌မာန၏အမြစ်များကိုရှာပါ.
ကျွန်တော်တို့ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်းတစ်ငါ​​တို့သည်စကားပြောကြတစ်ခုချင်းစီကိုစကားလုံးနဲ့အံ့သြဖွယ်အခွင့်အလမ်းပေးသောခဲ့. ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခငျသညျခြီးမွှောကျဖို့ငါတို့စကားကိုသုံးစွဲဖို့ရ. ကျနော်တို့သူဟာကြောင်းအခြားသူများဘုန်းပွင့်, သခင်ဘုရားအဘို့အဘုရားသခင်ကိုမြင်ရကိုကူညီငါတို့စကားကိုသုံးစွဲဖို့ရ.
ဒီတော့ငါ့အအားပေးမှုကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်တော်မူရန်သင်၏စကားသုံးစွဲဖို့မဟုတ်ပါဘူး. အစား, သငျသညျဘုရားသခငျအား-ပေးပါဘူးဘုန်းအသရေမှဖန်တီးခဲ့ကြဘယျသို့ပွုဖို့သူတို့ကိုအသုံးချ. ဒါဟာအားလုံးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုပိုင်ဆိုင်.
aimsbaker • စက်တင်ဘာလ 10, 2013 တွင် 1:39 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီဒီတော့လန်းဆန်းနှင့်ယုံကြည်မှုများခဲ့. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! ငါအချို့ခြောအဘို့ဤအပျေါမှာငါ့ယုံကြည်မှုများတည်ဆောက်ပြုလေ့လာနေတယ်ပါတယ်.
faithchanda171 • စက်တင်ဘာလ 10, 2013 တွင် 1:47 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ချစ်သောသခင်အရှင်,သင်တို့အဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏ရွှင်လန်းတယောက်တည်းကသင်၏ဘုန်းအသရေတော်ကိုလုယူဖျက်ဆီးဖို့အမြဲနှင့်မသင်၌သငျသညျဝမျးမွောကျဖို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကို glory.help သည်အရှင်ထိုက်နဲ့ကျွန်တော်လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာနှိမ့်ချခြင်းကိုခံရစေခြင်းငှါ. ကျနော်တို့မာနထောင်လွှားနှင့်အတူပြောသောအခါသင်နှင့်လူနာကျင်သည်ကိုခွင့်လွှတ်. ကျွန်တော်တို့ပြောအရာနှင့်ပိုပြီးကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်ဖြစ်ဖို့ချစ်လှစွာသောအကူအညီနဲ့စိတ်တော်…အာမင်
Godson • စက်တင်ဘာလ 10, 2013 တွင် 1:52 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဖန်ဆင်းရှင်, အဘယ်သူမျှမနေတဲ့ကစားသမားဖြစ်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းနှင့်အတူကယ်တင်ရှင်ဂိမ်း-changer / နတ်ဆိုး-လူသတ်လက်သို့အပ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်ရဲ့
ခရစ္စတိုဖာ • စက်တင်ဘာလ 10, 2013 တွင် 2:24 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
နိဒါန်းလူ၌အကြှနျုပျဆွဲထုတ်…ကအမှန်တရား! ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်သားသမီးမယ့်အစဉ်အဆက်ကတည်းကကိုယ့်နေ့စဉ်သူတို့ကိုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မြင်. သငျသညျကိုအပ်တပြင်လုံးကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုသည်ငါ့ကိုကောင်းကြီး! ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး!
မင်္ဂလာ • စက်တင်ဘာလ 10, 2013 တွင် 3:16 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါကြောင့်အာဟာရ! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဒါကိုကြိုက်တယ်: “သငျသညျအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်သူတအဖြစ်သညျဘုရားသခငျဝန်ခံနှင့်ဘုန်းအသရေထိုက်တန်ပါဘူးသောအခါအစော်ကားသော Talking ဖြစ်ပါသည်, သငျ့နှလုံးသို့မဟုတ်ထိုစကားမိမိတို့. အကြှနျုပျတို့ကိုပြုသည့်အခါ, ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏နှငျ့ဆိုငျသောဘုန်းအသရေကိုယူ” နှင့်ဤ:”ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌ရပ်လိုက်တဲ့အခါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်ကိုကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချသို့မဟုတ်တယောက်တည်းခရစ်တော်၌ခိုလှုံဖို့လည်းမာနထောင်လွှားကြ၏ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှသက်သေခံမည်လည်းကောင်း။”
QuincyStroman • စက်တင်ဘာလ 10, 2013 တွင် 3:45 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ထာဝရဘုရားသည်မိမိစကားဖြင့်ငါ့ကိုအားပေးပါရန်သင့်အားအသုံးပြု… တစ်ဦး Thass ဧဝံ
eveno M က. • စက်တင်ဘာလ 10, 2013 တွင် 3:48 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါကအံ့သြဖွယ်ဖတ်ခဲ့သည်. တောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့နှိမျ့ခခြွငျးအတွက်, ငါတို့သည်လူတို့သညျအကြှနျုပျတို့နှိမ့်ချဖြစ်ကြောင်းသိမြင်စေရန်အကျင့်ကိုကျင့်ဘဲနေသောကြောင့်သတိထားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်, သူ့ဟာသူအတွက်သောကမာနပဲ.
Jason • စက်တင်ဘာလ 10, 2013 တွင် 5:29 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါအကြီးဆုံးအွန်လိုင်းအဘိဓါန်ဘတ်စ်ကားအောက်မှာခရီးစဉ်ပစ်ဆိုလိုသို့မဟုတ်တစ်စကားစစ်ထိုးပွဲစတင်ပြီးအတွက်မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. ငါရှင်းလင်းချက်အဘို့ကိုသာမေးမြန်း. ငါအလုပ်ရှာနေမကြာသေးမီကဘွဲ့ရဖြစ်ကြောင်းကို. ကြှနျုပျတို့မညျသို့အချို့သောလမ်းအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှအလုပ်ရှင်များမှကောင်းသောအောင်မြင်မှုရှင်းပြအကြောင်းကိုသက်သာဖြစ်ရန်ရှိသည်ဘယ်မှာအလုပ်တစ်ခုအင်တာဗျူးစော်ကားသောစကားမပြောတတ်ကြပါဘူး?
ခရီးစဉ် Lee က • စက်တင်ဘာလ 11, 2013 တွင် 10:40 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင်ကဘတ်စ်ကား bro အောက်မှာငါ့ကိုပစ်မနေ! ငါတို့သည်ကြီးစွာသောမေးခွန်းရဲ့အထင်. ငါမူကားအထက်ကပြောသည်အဖြစ်, သင်သည်ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်တော်မူရန်သင်၏စကားကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမာနထောင်လွှားမိန့်ခွန်းဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျအရှငျနှငျ့အဘုန်းတော်ကိုထိုက်တန်အဖြစ်ဘုရားသခငျသညျအသိအမှတျပွုဖို့ငြင်းဆန်တဲ့အခါင်.
သငျသညျသူ၏ဘုန်းအသရေ၏ဘုရားသခင့လုယက်ခြင်းမရှိဘဲသင့်အောင်မြင်မှုများကိုရှင်းပြနှင့်သင်ကောင်းတစ်ဦးကိုအလုပ်ပြုပါချင်ပါတယ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင် (နောက်ဆုံးတော့, ကိုယ်တော်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆည်းကပ်ထူးချွန်နှင့်အတူလုပ်ကိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်သင့်တယ်). သငျသညျပွောဆိုရန်မလိုပါ “ဘုရားသခင်အားဘုန်းအသရေဖြစ်” တိုင်းဝါကျပြီးနောက်, ဒါပေမယ့်သင်ကအားလုံးကောင်းသောလက်ဆောင်များကို၏လှူအဖြစ်ဘုရားသခငျသညျအသိအမှတျပွုတစ်ဦးနှိမ့်ချကိုယ်ဟန်အနေအထားနှင့်အတူအားလုံးလုပ်သင့်. နှိမ့်ချသင့်ရဲ့အရည်အချင်းကိုမှညွှန်ပြသို့မဟုတ်မောက်မာစွာကြွားအကြားကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ရှိပါတယ်. သဘော Make?
ယေရှဲ • စက်တင်ဘာလ 11, 2013 တွင် 1:13 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဘယ်လိုလဲ, ခရစ်ယာန်တန်ဖိုးများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခံရအပေါ်သို့ frowns တဲ့ယဉ်ကျေးမှု၌, ကျွန်တော်တို့ရဆိုပါစို့နေကြတယ်, ကာရိုးသားသောပေးဆောင်အလုပ်ကိုင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မာနထောင်လွှားကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးရတဲ့မပါဘဲ? ငါသည်လည်းဘတ်စ်ကားအောက်မှာသင်ပစ်လိုက်နဲ့အမှားရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးအသက်ရှင်ရန်အသည်းအသန်လိုလားသူတစ်ဦးဆယ်ကျော်သက်အဖြစ် “unashamed လူနေမှုပုံစံစတဲ့” ထိုသူတို့ပြုလေရာရာ၌ဧဝံဂေလိတရားကိုပြန့်နှံ့, ငါသည်လည်းတစ်ဦးအလုပ်လိုအပ်ပါတယ်. ငါပြဿနာပစ်ခတ်ခံရကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲအလုပ်ခွင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိမိကိုယ်ကိုဖော်ပြနိုင်ဖြစ်ခြင်းသည်မထင်.
ယောဟနျသ • စက်တင်ဘာလ 11, 2013 တွင် 8:58 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဟုသူကပြောသည်လိုပဲ, ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာစကားပြောရုံအချက်အလက်များဖော်ပြမထားဘူး. ဒါဟာအစားဘုရားသခငျ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်တော်မူခြင်းငှါရှာကြံင်. သင်ကောင်းတစ်ဦးကိုအလုပ်ပြုပါချင်ပါတယ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်, ဘုန်းအသရေ၏ဘုရားသခင့လုယက်ခြင်းမရှိဘဲသူသည်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်မြတ်သောအလုပ်အဘို့အထိုက်တန်ပါတယ်
DaughterofGod • စက်တင်ဘာလ 11, 2013 တွင် 1:27 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤကိုးကားနှင့်အတူတစ်ခက်အချိန်ရှိခြင်းပါ၏: “သင်သည်သင်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာထင်လာတဲ့အခါသင်ဘုန်းအသရေထိုက်ကြောင်း, သူ့ဟာသူနေတဲ့ဒုစရိုက်ဖြစ်၏။” ငါကောင်းမွန်စွာတစ်ခုခုလုပ်သောအခါ,, ငါနောက်ကျောအပေါ်တစ်ဦး Pat အလိုရှိသော, အားပေးမှုစကားလုံးတစ်လုံး, ငါ၏အမှုမြတ်သောအဖြစ်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းသို့မဟုတ်အချို့သောအရိပ်အယောင်. ကျနော်တို့မဆုပ်အနစ်အားကစားသမားများနှင့်အားကစားအဖွဲ့များကိုခြီးမှမျး, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုထူးချွန်ချီးမြှောက်သောဆုနှင့်ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်လည်ပတ်. ဒါကြောင့်ဘယ်လိုငါလက်တွေ့ကျကျ '' လျော့နည်းပါဘူး’ အခါ, သတ္တုတွင်း၏ဤအလိုဆန္ဒ, ရိုးရိုးသားသား, ငါမှမလိုချင်ကြဘူး? ကိုယ့်အားဖြင့်ခန့်မှန်း, ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်နှင့်လုပ်သောအထံတော်မှကြွလာသည်ဟုအသိအမှတ်ပြု, ကျွန်တော်သူ့ကိုမှလက်ခံရရှိအားလုံးဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများ attributing.
မိုက်ကယ် • စက်တင်ဘာလ 11, 2013 တွင် 1:49 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကိုယ့်ကသင့်ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုယူချင် (ခရီးစဉ် Lee က) ဘုရားသခငျသညျသူ့ကိုဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းဖို့သင်အသုံးပြုခွင့်များအတွက်. ငါနှင့်ငါ့ဇနီးကယ့်ကိုသင့်ဂီတပျော်မွေ့. သင်တန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးသီချင်းသည် “ကောင်းတဲ့အရာ”. ငါသည်သင်တို့ကိုထပ်မံသင့်ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနမှီအောင်လိုက်မှဂီတအောင်ရပ်စဲကြောင်းဖတ်, ဤစကားမှန်သည်? ငါတို့သည်သင်တို့ bro တူပိုပြီးအဆိုတော်တွေဟာလိုအပ်ပါတယ်.
JB • စက်တင်ဘာလ 11, 2013 တွင် 3:46 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ငါသည်သင်တို့ကိုသင်ဖန်ဆင်းကြေညာချက် မှလွဲ. ငါတို့စကားကို၏တန်ဖိုးနှင့် ပတ်သက်. ဤ blog တွင်ဖော်ပြထားသောအရာခပ်သိမ်းအများစုသဘောတူ “ဘုရားသခင့ပေးသည်နှင့်နှုတ်နှင့်သူဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်မပြောဘဲ”. ဘုရားသခင်ဖြစ် 100% ကောင်းသော! အန္တရာယ်ပြုပါသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုမှတစုံတခုကိုပယ်ရှားဖို့ကြိုးစားမှသူ့ကိုအတွက်မကောင်းတဲ့၏တစ်ဦးအောင်စမရှိ. စာတနျသခိုးယူ (ကြာ / မပြောဘဲ), သေ, နှင့်ဖျက်ဆီး. ယုံကြည်သူများအဖြစ်ကျနော်တို့ (သို့မဟုတ် Non-ယုံကြည်သူများ) မနာခံသဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိကပြုပါ (သို့မဟုတ်မသိဘဲဖြစ်ခြင်း) ဘုရားသခင့ပြီးသားမြေကြီးပေါ်မှာသတ်မှတ်ထားသည့်ဝိညာဉ်ရေးရာစံ. ဒါကြောင့်သူကဒါရမျးကိုစာတနျပေးနိုငျသောရှိသည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုလားအပြည့်အဝကောင်းမြတ်ခြင်းခံယူဖို့ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်သောကွောငျ့ဘုရားသခငျသညျအဓိကအားဖြင့်မာနကိုမုန်း (နှင့်သူ၏တပ်များသည်) ကြွလာတော်မူနှင့်ငါတို့မောကျမာနည်းလမ်းများကိုအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်မှဥပဒေရေးရာျာ. ဒီမိန့်ခွန်းသို့မဟုတ်သင်ဆင်းစကားပြောဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်ကျွန်မဘလော့ဂ်၏အကျိုးကျေးဇူးသည်ယုံကြည်သည့်ပွင့်လင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးမမုန်းသည်.
ခရီးစဉ် Lee က • စက်တင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 1:23 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
စာဖတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! နှင့်သင့်အားပေးအားမြှောက်စကားသည်အ. ငါသည်ဘုရားသခင်၏ကြောင်းသင်တို့နှင့်အတူသဘောတူ 100% ကောင်းသော. အဲဒီအကြောင်းမျှသံသယရှိပါတယ်. သို့သော်သူကယူသွားဘူးမဆိုလိုပါ. ယောဘသည်အကြောင်းကိုအဘယျသို့ 1:21? ငါမူကားအထက်ကပြောပါတယ်အရာကိုအချို့ကျမ်းပိုဒ်တစ်ဦးထံမှအတိအကျကိုကိုးကားခဲ့. "အဝတ်အချည်းစည်းငါသည်ငါ့မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲကထွက်လာ, နှင့်အဝတ်အချည်းစည်းငါထွက်သွားပါလိမ့်မယ်. သခင်ဘုရားကိုပေး၏နှင့်သခင်မပယ်ရှားခဲ့သည်; သခင်ဘုရား၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ "
ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ယူသွားပါဘူး, သူဆဲကောင်းပါတယ်. လှပတဲ့အရာဖြစ်ပါသည်, ဘုရားသခင်သည်သူ၏လူမျိုး၏ဘဝအသက်တာ၌ကောင်းသောအဘို့ကိုတောင်မကောင်းတာတွေကိုအသုံးပြုသည်. ရောမ 8:28 ဒီအရာရဲ့ပုံသက်သေကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ငါကပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါသည်ဤအပေါ်တစ်ဖွဲ့လုံး post ကိုရေးဖို့စေခြင်းငှါ. နောက်တဖန်စာဖတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
RW • စက်တင်ဘာလ 11, 2013 တွင် 8:35 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်, ဘုရားသခင့အားလုံးသိတယ်. သငျသညျအသံကျယ်ဘုရားသခငျသညျဘုနျးတျောကိုထုတ်ပေးသို့မဟုတ်ထွက်အသံကျယ်သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုများအတွက်အကြွေးယူပဲဖြစ်ဖြစ်, ဘုရားသခင်သည်သင်၏နှလုံးဘုန်းအသရေပေးကမ်းသောသူသိတယ်. သငျ့နှလုံးအမှန်တကယ်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းသည်မဟုတ်လျှင်ကျယ်လောင်စွာသညျဘုရားသခငျ၏ဘုနျးတျောစကားပြောလည်းမာနထောင်လွှားမိန့်ခွန်းဖြစ်နိုင်. ကျွန်တော်တို့အဆက်မပြတ် nonbelievers ပတ်ပတ်လည်ကိုဘုရားသခငျ၏ဘုနျးတျော၏စကားကိုပြောသောအခါ, ကျွန်တော်တို့ Peninnah ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏နှင့် nonbelievers ဟန္နကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏. ခရစျယာအဖြစ်ကျနော်တို့ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးသညျဘုရားသခငျကိုခြီးမှမျးမနိုင်တဲ့အခါကိုခြိမ်းခြောက်ခံစားရဖို့စိတ်သဘောထားရှိသည်. ကျွန်တော်တို့အစားကလေးများနှင့် nonbelievers ၏ဝိညာဏကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်အတူ Penenniah ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ nonbelievers များထဲတွင်ဟန္နကဲ့သို့သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာမပါဘဲကျန်ကြွင်းသောဟန္နသားသမီးမပါဘဲခဲ့ကြသည်. အဘယျသို့ကျွန်တော်ခံစားမိဘုရားသခငျသညျခြီးမှမျးဖြစ်ပါသည်, တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအရာ၌ဝါကြွားသည်. ငါတို့ရှိသမျှသည်အချိန်တိုင်းဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ရပါမည်ငါတို့မူကားကိုယ်တော်နှင့်အတူဖြစ်မရှေးခယျြသူပျောက်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအကြောင်းမေ့လျော့မထားရ. သင်သည်သင်၏အောင်မြင်မှု၏အသိအမှတ်ပြုမှုကို ယူ. ပင်ပယ်ရှားဘုရားသခင်ထံမှဘုန်းအသရေကိုယူပြီးမပါဘဲတာဝန်ယူနိုင်ပါသည်. သငျသညျသူ၏လမ်းကြောင်းကိုလမ်းလျှောက်ဖို့ရှေးခယျြခဲ့သောကွောငျ့သငျသညျသူတို့အားကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလက်ခံရရှိ. သငျ့နှလုံးထဲမှာဘုရားသခင်ကိုဘုန်းအသရေ Give, အကြံအစည်, နှင့်ပဌနာ. သင်၏စကားရုံများမှာ, စကားလုံးမြား. တစ်ခုခုကိုအိပ်ဘယ်တော့မှမ. တစ်ဦးအင်တာဗျူးသင်ပြုသောအမှုဖူးတဲ့အမှုတို့ကိုပြုပါတယ်ဘယ်လိုမေးရန်ဖြစ်လျှင်, နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားကိုအသုံး. ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု, သင့်ရွေးချယ်မှုအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတော်မှရွေးချယ်ခဲ့သည်, သူတို့အားကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဘို့ဘုရားဘုန်းအသရေပေးခြင်းအားဖြင့်သူကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆက်လက်လိမ့်မည်. အခြားမှတ်စုတွင်, သငျသညျအလုပျသညျဘုရားသခငျမှ ပို. ပင်ထွက်ရောက်ရှိရန်ကြိုးစားရှာဖွေရရုန်းကန်နေလျှင်.
ယောနသန် • စက်တင်ဘာလ 11, 2013 တွင် 8:53 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤသူသည်ငါကျိန်းသေနားထောငျလိုအပျတဲ့သတင်းစကားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ပင်ဘုရားသခင်အကြောင်းဖြစ်ကြောင်း Facebook ကရေးသားချက်များအပေါ် Self-တရားသဖြင့်အပြင်းအထန်ရှာတွေ့. ငါလုပျသမြှအဘို့အကြှနျုပျ၏စိတျရငျးသို့နက်ရှိုင်းစွာကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါတယ်ခန့်မှန်း. ခရစ်တော်၌ငါ့ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေ, y'all လိုလျှင်, ငါ့အဘို့ဆုတောင်းပဌနာ!
Megan • စက်တင်ဘာလ 11, 2013 တွင် 10:27 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါအများကြီးသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများမျှဝေဘို့ကျေးဇူးတင်စကား. ကိုယ့်တာ 14 နှင့်ငါ့မိသားစုငါ့အဆိုသဘာဝကျပါတယ်လျှင်ထို့ကြောင့်၎င်း၏တကယ်အထောက်အကူဖြစ်စေဝေမျှနှင့်အားပေးအားမြှောက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယုံကွညျခွငျးအကွောငျးအဘယျအဖွင့်အဘယျသို့ထွက်တွက်ဆကိုကူညီဈတကယ်ကဒီနှင့်အခြားခရစ်ယာန်အရင်းအမြစ်များနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကျောင်းမသွားဘူး.
JB • စက်တင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 3:35 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကြောင်းခရီးစဉ်ကိုတူး. တုံ့ပြန်ချက် bro တန်ဖိုးထားပေမယ့်ကံမကောင်းတာဒီတစျအပေါ်သဘောမတူဖို့သဘောတူရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်. ဟားဟား။. ဒီလိုဖော်ပြထားကြောင်းယောဘသည်တစ်ဦးကျမ်းပိုဒ်ရှိပါတယ် “ဘုရားသခင့ပေးသည်နှင့်သူသိမ်းယူ” ဒါပေမယ့်ယောဘသည်ဘုရားမ၏စကားကိုခဲ့သည်. ယောဘသည်သခင်ဘုရား၏မျက်မှောက်၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်ခဲ့ပေမယ့်အခိုက်သူကသူသညျဘုရားသခငျ operated ရိပ်မိပုံအမြင်တစ်ခုမသိဘဲအမှတ်မှလာသောသူတို့အားစကား. ယောဘ၏ကြွင်းသောအရာအားဖြင့် Reading (အထူးသအခန်းကြီး 38-41) ဘုရားသခငျသညျသူ့ကို၏အမိန့်တော်ရှိ၏ဘယ်လောက်မသိဘဲအကြောင်းယောဘပြောသောနှင့်သူ့ယူဆချက်နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုမေးတယ်. ယောဘသည် 42:3 (NIRV) ယောဘသည်ဘုရားသခင်နှင့် Said မှ replied: “သငျသညျအကြှနျုပျကိုမေးတယ်, '' အဘယ်သူသည်သင်တို့ကိုငါ့အစီအစဉ်များနှင့်အတူသဘောမတူဖြစ်ကြောင်းသင်ထင်ကြဘူး? သင်အကြောင်းပြောနေတာဘာမသိရပါဘူး။’ ငါလုံးဝနားမလည်ခဲ့ဘူးသောအရာတို့ကိုအကွောငျးပွော. ငါသိရန်အဘို့အလွန်းအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုသော။” ထိုအခါ6ကျမ်းပိုဒ်ယောဘကပြောပါတယ်: “ဒါနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်မုန်းတီး. ငါသည်သင်တို့နှင့် ပတ်သက်. ပြောကြားခဲ့သည်အဘယျအဘို့အတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူး. ငါမွမှေုနျ့နှငျ့ပြာ၌ထိုင်လျက်တာပါဒါကြောင့်ပါပဲ။” သူအမှုအရာသည်နောက်တဖန်သူ့ကိုအဘို့ကိုမှန်ကန်ကောင်းမွန်စွာသွားကြဖို့စတင်သောအခါရဲ့နောင်တရပြီးတဲ့နောက်. ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသူအပေါငျးတို့သညျသူ၏ပစ္စည်းပစ္စယယူသွားဘဲမြင်ချင်ခဲ့တယ် (စာတန်ခဲ့) ထိုသို့သူ၏အသက်တာထဲသို့ဝင်စာတန် access ကိုခွင့်ပြုသောစာအုပ်၏အစအဦးထဲမှာဖော်ပြပါတယ်ကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောယောဘ. ငါ '' မှတ်ချက်အပိုင်းပေါ်မှာငါတို့စကားပြောဆိုမှုတစ်ပြပွဲလုပ်ချင်ကြပါဘူးခရီးစဉ်’ သငျသညျလိုအပ်သောမြင်ရလျှင်ဒါရုံပြန်ကြားချက်အဘို့အကြှနျုပျ၏အီးမေးကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်. ငါသည်ဘုရားသခင်၏လူသည်အစေခံရန်သင့်အခွက်တဆယ်နှင့်သင်တို့၏နှလုံးအရမ်းလေးစားမိပါတယ်. နောက်ပိုင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေး • မတ်လ 28, 2017 တွင် 4:13 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
တစ်ဦးအလည်အပတ်ဝဘ်စာမျက်နှာကိုပေးဆောင်ဖို့လူ, ဒီ web site ကိုပေးဘာင်.
အစီအစဉ် • နိုဝင်ဘာလ 23, 2017 တွင် 3:14 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Y ကဦးဒါintereѕtingနေကြသည်օ! Іငါအမှန်တကယ်မတိုင်မီတူsometһingကိုဖတ်ပါတယ်စဉ်းစားကြဘူး.
Rеalⅼy။. ဒီဖွင့်စတင်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ဤသည်ѕite web ပေါ်မှာလိုအပ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်, ѕomeоriginalityနှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကို!